के त्यहाँ जेफ्री एपस्टेन केसमा टाउको घुमाउने छ? : मार्टिन Vrijland
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	21 अगस्ट 2019 मा	•6टिप्पणिहरु
जेफ्री एपस्टेन केसको बारेमा सबै गडबडी पछि, जसमा बेलायती राजकुमार एन्ड्र्यू पनि देखा पर्न सक्थे, तर फ्रेडी हेनकेन जस्ता नामहरू पनि देखा पर्न सक्थे, तपाईले सोच्नुहुनेछ कि अब सम्भ्रान्तवादी टाउको अन्ततः घुम्दैछ। हामी वास्तवमै कस्ता छौं। यो बिर्सनु गाह्रो छ कि मिडिया ती एलिस्टिस्ट टाउकोको हातमा छ र वैकल्पिक मिडिया पनि ठूलो हदसम्म शक्तिको जेबमा छ। यसको मतलब यो छ कि यदि एपस्टाइन जस्ता केसहरू समाचारमा ठूलो हुन्छ भने यो योजना बनाइएको कारणले मात्र हुन्छ। अन्यथा तपाईं यसलाई देख्नुहुने छैन; यो मौन हुँदैछ र त्यहाँ एकल मुख्य धारा मिडिया च्यानल छैन कि एक सेकंड को लागी पनि ध्यान दिईन्छ।
त्यसैले गलत आशा। कुनै हेड रोल गर्न गइरहेको छैन। जेफ्री एपस्टेनको हत्या भएको थियो वा जेलको कम्बलमा झुण्डिएको थियो (जुन फाट्नुपर्दछ) बिना कोठाको सेलमा, यो पनि दिमागलाई मीठो राख्नको लागि मात्र छलफल हो। यो सबै साबुन श्रृंखला सामग्री हो। हामीलाई केही पनि थाहा छैन। एपस्टेन मरेको हुन सक्छ, अझै जीवित हुन सक्छ, एक सुन्दर प्लास्टिक अपरेशन गरेको हुन सक्छ, वा अब एक महिलाको रूपमा जीवनमा जान सक्छ। वर्तमान समयमा जहाँ तपाईं आवश्यक सफ्टवेयरको साथ सबै कुरा नक्कल गर्न सक्नुहुनेछ, हामी जान्दैनौं कि एपस्टेन जेलमा थिए कि थिएन वा वास्तवमा उनलाई स्ट्रेचरमा लगिएको थियो कि थिएन। हामीलाई थाहा छैन कि कथाहरू र प्रशंसापत्र सही छन् कि छैन।
हामीलाई मात्र थाहा छ कि शब्द 'पेडोफाइल' हाम्रो रेटिनामा दैनिक जलेको छ। जिमी सेभिलेको केसमा जस्तै, त्यो शब्द एपस्टेन मार्फत सीमात पनि छ केही अलि जवान युवतीहरूको लागि यौन प्राथमिकतामा। शब्द 'पेडोफिलिया' तसर्थ कुमारी सुन्दरीहरूको लागि यौन प्राथमिकतामा मुख्य रूपमा लाउन्डर गरिएको देखिन्छ। र त्यो मलाई यो विशेष साबुन को मुख्य लक्ष्य देखिन्छ। हामी सबै एम्स्टर्डम रोबर्ट एम केसबाट जान्दछौं कि वास्तविक पेडोफिलिया धेरै साना बच्चाहरूको यौन दुर्व्यवहार वरिपरि घुम्छ; बच्चाहरू देखि बच्चाहरू सम्म।
शब्द 'पेडोफिलिया' मा यसमा 'फिलि' शब्द छ, जुन बच्चाको लागि 'प्रेम' को सन्दर्भ हो। हामीलाई यो पनि थाहा छ, उदाहरणका लागि, विवाहित समलि .्गी जोडीको रूपमा तपाईं अफ्रिकाबाट कालो बच्चाहरू अपनाउन सक्नुहुन्छ र यसरी एम्स्टर्डम नहरका पर्खालहरूमा बच्चाप्रतिको स्वतन्त्र प्रेमको अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ, तर वास्तविक 'पेडोफिलिया' सँग प्रेमको कुनै सम्बन्ध छैन। हामी जनावरको बारेमा कुरा गर्दैछौं असुरक्षित बच्चाहरूलाई प्रेम वा यौन प्राथमिकताको सास अन्तर्गत दुरुपयोग गर्न।
जेफ्री एपस्टेनले ती मुद्दाहरू मुख्य रूपमा बच्चा, बच्चा र प्रेस्कूलरको यौन शोषण "सुन्दर कुमारी केटीहरु संग यौन" को बन्धन बन्न गरेको देखिन्छ र धेरै व्यक्ति शायद यसको बारे मा कल्पना गर्न सक्छन्। हामी पेडोफिलियालाई "सबै भन्दा राम्रो बुझ्न योग्य यौन प्राथमिकता" मा परिणत गर्न कट्टर मिडिया अभियान देखिरहेका छौं।
Pedophile Jeffrey Epstein को neuroscientific अध्ययनहरू गहिरो विश्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एआई नेटवर्कमा एकीकृत हुन्छन्
ट्याग: एन्ड्रयू, एपस्टीन, विशेष, Freddy, Heineken, जेफरी, जवान, केटीहरु, दुरुपयोग, pedophilia, राजकुमार, यौन
21 अगस्ट 2019 मा 15: 15
"यो कुरा बिर्सनु गाह्रो छ कि मिडिया ती एलिस्टवादी टाउकोको हातमा छ र वैकल्पिक मिडिया पनि ठूलो हदसम्म शक्तिको जेबमा छ। यसको मतलब यो छ कि यदि एपस्टाइन जस्ता घटनाहरू समाचारमा ठूलो हुन्छ भने यो योजना बनाइएको कारणले मात्र हुन्छ। ”
यो तथ्य हो कि वैकल्पिक मिडिया बेवास्ता गर्न मात्र धेरै खुसी छ।
यसको मतलब यो होइन कि गरिएको दावीहरू सत्य हुन सक्दैनन्, म इमानदारीसाथ थाहा छैन के हो वा सत्य होईन। तर मलाई थाहा छ कि यो मिडियामा अचानक 'समाचार' मात्र होइन।
त्यहाँ एक राम्रो मौका छ कि Epstein उसको निजी टापुमा गाउँदै हुनेछ जीवनको अन्तिम वर्षहरूमा, कसलाई थाहा छ?
25 अगस्ट 2019 मा 17: 16
एपस्टेनसँगको कुराको बारेमा तपाईले विशेष नै सोध्नु पर्छ: जो यो पोसिब बनाएको छ?!?!
22 अगस्ट 2019 मा 02: 57
त्यो मान्छे ज्योति खडा गर्न सक्दैन। हामीले उनीहरूलाई धिक्कार्नु हुँदैन, तिनीहरू पनि गर्छन्। यदि तपाईं पछि मूल फारममा फर्कनुभयो र तपाईं शुद्ध रूपमा सबै कुराको निरीक्षण गर्नुभयो भने, तपाईं आफ्नो कार्यहरूको परिणामको निरीक्षण गर्नुहुनेछ। यसको मतलब यो होइन कि यदि यहाँ बिरामीले बच्चाहरूलाई दुर्व्यवहार गर्छ भने यहाँ र अब म केहि गर्दिन। हामी पछि देख्नेछौं यदि म यसबाट टाढा गएँ यदि मैले व्यक्तिगत रूपमा यसलाई बाहिर लिएको छु।
तर तपाईं सहि हुनुहुन्छ, तिनीहरूले सीमाहरू बढाउँदै छन् र नयाँ मानक प्रचार गरिरहेका छन्। यो पृथ्वीमा हुने सबैभन्दा खराब र सबैभन्दा अन्धकारमय चीज हो।
22 अगस्ट 2019 मा 03: 00
धेरैजसो त्यहाँ छन् र यसलाई जाँच गर्नुहोस्।
24 अगस्ट 2019 मा 21: 24
म उत्सुक छु जहाँ यो समाप्त हुन्छ। यो पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ कि यौन दुर्व्यवहार गर्नेहरूलाई पीडित भूमिका तोकिनेछ। विशेष गरी तपाईको आफ्नै न्यायाधीशलाई खेल्ने छैन। तपाईं आफैले यी तथ्या handle्कहरू ह्यान्डल गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईंले पाँच व्यक्तिसँग अपअप गर्नु पर्दैन।
25 अगस्ट 2019 मा 17: 12
क्रुर रूपमा यस सन्दर्भमा जनावर राज्यको लागि एक अपमान हो! हामीलाई थाहा छ कि शेरनीले छिटो जोडीमा साथी राख्न चाँडो आफ्नो जवान बच्चा खान्छ। सिंहले उनको सन्तानलाई मृत्युको रक्षा गर्नेछ। ईश्वरीय मानव राज्यमा, बच्चाहरूलाई समेत सिधा र शाब्दिक रूपले शैतानले एक मानवको रूपमा भेष लगाएर सेवन गर्दछन्।
यो कसरी हुन सक्छ कि यो शैतानी रोग मुख्य रूपमा वा प्रायः तथाकथित उच्च सर्कलहरूमा देखा पर्दछ। किनभने तिनीहरू यसको साथ टाढा गए? वा पेडोफाइल, समलिose्गी, उभयलिंगी इनब्रीडिंग स्तर यति उच्च छ कि चाँडै अब "सामान्य" व्यक्तिहरू हुनेछैनन्। रोबर्ट स्टिलका अनुसार, ह्वाइट हाउसमा र वरपर (हाम्रो ननस्पीटमा राउन्ड हाउस थियो) त्यहाँ कोही त्यस्तो व्यक्ति छैनन् जो पेडोफाइल वा समलि .्गी छैन। प्रजनन कृत्रिम ईन्सेमिशन एट मार्फत मात्र हुन्छ। आदि।
« प्रजातन्त्र फोरम डेमोक्रेसी (FvD) पराजयको लागि
अमेजन जलिरहेको छ, पृथ्वीको फोक्सो आगोमा छ! »
कुल भ्रमण: 12.349.046
डर्क वाइर्समाको हत्याको बारेमा के सत्य छ र त्यो 'मुकुट गवाह' को अर्थ के हो?
मार्टिन भिजल्याण्ड op डर्क वाइर्समाको हत्याको बारेमा के सत्य छ र त्यो 'मुकुट गवाह' को अर्थ के हो?
SandinG op डर्क वाइर्समाको हत्याको बारेमा के सत्य छ र त्यो 'मुकुट गवाह' को अर्थ के हो?
पेट्रिया भ्यान ओस्टन op डर्क वाइर्समाको हत्याको बारेमा के सत्य छ र त्यो 'मुकुट गवाह' को अर्थ के हो?